फेसनकै लागि भनेर खर्च गर्दिन : बाबु बाेगटी मलाई सफा हुनुपर्छ, जुन पनि फिट लाग्छ । बजारमा कुन फेसन आयो भनेर म फलो गर्दिनँ । दैनिक जीवनमा त्यति धेरै फेसनेबल हुन्नँ । Share
पूर्वडीआईजी रञ्जनको जेल जीवन : अध्यात्ममा रमाउँछन्, प्रेमिका भेटिरहन्छन् श्रीमती गीता ढकालको हत्या गरेर जन्मकैद सजाय भुक्तान गरिरहेका सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) रञ्जन कोइराला जेलभित्र अध्ययनशील कैदीका रुपमा परिचित भएका छन् Share
श्रीमान् विदेशमा, खेत बाँझै ! धैर्यसँग श्रीमानलाई पर्खिने तामाङ जस्तै महिलाहरुले श्रीमानसँगै नयाँ लुगा पनि पर्खिन्छन् । पसलको उधारो तिर्ने दिन पर्खिन्छन् । घरको छानो टाल्ने दिन पर्खिन्छन् । उपचार गर्ने दिन पर्खिन्छन् । यस्तै यस्तै गर्दा गर्दैै जीवनभर नै पर्खिन्छन् Share
माता कसरी बन्छ मान्छे ? पीडाका कारण उनीहरूमा कन्भर्जन डिसअर्डरको समस्या आउँछ । तर, समाजले त्यसलाई बोक्सीको उपमा दिन्छ । यस्तै, प्रकारको समस्या ठूला घरानाका महिलामा देखियो भने देवत्वकरण गरिन्छ । अलौकिक शक्ति आएको दाबी गरिन्छ । पूजा हुन्छ, अनि ती महिला माता बन्छिन् Share
नरिवलको पानीका फाइदा Share
अफिसमा कामको प्रेसर खतरनाक हुन सक्छ आफ्नो व्यस्त दिनचर्याबाट केही समय छुट्टी लिनुहोस् र तनाव कम गर्नुहोस् । Share
चिनियाँ र भारतीय सेनाले सीमानामा सँगै गरे याेगाभ्यास सीमानामा एक अर्काविरूद्ध लड्न तम्तयार हुने चिनिया र भारतीय सेनाले संयुक्त याेग अभ्यास गरेका छन् । Share
आफ्नै कारण मानिस नसर्ने रोगको सिकार बन्दै नसर्ने रोगमा उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हृदयाघात, क्यान्सरलगायतका रोग पर्छन् । जसको प्रकोप पछिल्लो समय नेपालमा निकै बढेको छ । समयको परिवर्तनसँगै नेपालीको जीवनशैली पनि सहज हुँदै गएको छ । तर, सुखी जीवनशैली अपनाउने क्रममा मानिसले प्राणघातक नसर्ने रोग पनि पाल्दै छन् । Share
‘इन्जिनियर भाइ’ को चिया पसल पाँच हजार भाडा तिर्छु । महिनाको ४५ हजार कमाएको छु । सुरुमा बोर्डमा लेखिएको नाम देखेर सबै हाँस्थे । चिया पसल खोल्न ठूलै क्रान्ति गर्नुपर्यो Share
‘इन्स्टाग्राम क्वीन’ को हट पोज हालैमात्र उनले एउटा ‘बोल्ड’ फोटो सेयर गरेकी छन् । उनी चलचित्र ‘कृ’ बाट नेपाली चलचित्रमा प्रवेश गरेकी हुन् । Share
हिरोभन्दा बढी पारिश्रमिक लिन्छन् ब्रम्हानन्दम कुनैबेला सामान्य जीवन बिताइरहेका ब्रम्हाले आफ्नो क्षमता पहिचान गरे र दुनियाँलाई देखाइदिए आफूसँग भएकाे क्षमता निचोरेर सफलता निकाल्ने हो । Share
पुँजीवादी प्रेम र यौनको अतिरञ्जना समाज विपरीत लिंगबीचको सम्बन्धबाट निर्मित छ । यो नियम मानव समाजमा पनि लागू हुन्छ । विपरीत लिंगीबीचको सम्बन्धका बहुआयाम छन् । यौनसँगै प्रजनन, सहजीवन र सामाजिक जीवनका लागि विपरीत लिंगीबीचको आकर्षण र सम्बन्ध अनिवार्य छ Share
समुन्द्र तटमा ‘लजालु’ अञ्जलीको यस्तो रुप अञ्जलीले बहराईको सामुन्द्रको तटमा बसेको निकै बोल्ड तस्बिर खिचेर समाजिक सञ्जालमा पोस्ट सार्वजनिक गरेकी छन् । Share
कुरा मात्रै गर्ने मोहन विक्रम, काम नगर्ने मनमोहन : प्रश्रित आफू फकिर भएर भए पनि देशलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर मरीमेटी गर्ने पुष्पलाल कमरेड । सानै गुट भए पनि जहाँ जाँदा पनि चुलो र कोइलासमेत बोकी हिँड्ने तुलसीलाल । मान्यजन भएका र धेरै काम नगरी प्रसिद्धि पाएका मनमोहन अधिकारी Share
चार्ल्स शोभराजसँग किन टाढिइन् निहिता विश्वास ? कारागारका अनुसार शोभराजको मुटुको अपरेसन गर्नुपहिला निहिता हप्ताको दुई दिन शोभराजलाई भेट्न सुन्धारा कारागार पुग्थिन् Share
‘नर्क’बाट उठेर सुधार अभियान कुनै बेलाका नामुद लागूऔषध प्रयोगकर्ता हुन्, सम्राट सिंह । ललितपुर गोदावरीका सम्राटले लागूऔषध प्रयोग गरेकै कारण जीवनमा खुब सास्ती पाए । Share
सावधान ! खानाका नाममा विष त खाइरहेका छैनौं ? बिहान र बेलुका नै खाना नखान चिकित्सकहरू सल्लाह दिन्छन् । सकेसम्म बेलुकाको समयमा हल्का चिज खानुपर्दछ । त्यस्तै, हरेक दिन आधा घण्टा शारीरिक व्यायाम गर्दा शरीरलाई स्वस्थ्य राख्न मद्दत पुग्छ । Share
डोजरको आवाजले अहिले पनि तर्साउँछ सवितालाई १२ वर्षदेखि सविता थारूको आँसु मिसियो, बाग्मतीमा । दुःख र व्यथाको साक्षी बनिदियो, बाग्मती । २०६४ सालयता सविताको जीवन अडिँदै छ, बाग्मती किनारमा । सहरले अनुहार फेर्यो, सडकमा कालोपत्रेको तह थपियो । काठमाडौंका घरले रंग फेरे । १२ वर्षमा खोलो पनि फर्किन्छ भन्ने उखान कहिल्यै चरितार्थ भएन सविताको जिन्दगीमा । Share
गर्मीमा वानपिस नै किन ? Share